Ubomi Obungunaphakade Ngenxa Yentlawulelo—Isipho Esingafaniyo Nezinye
Isipho Esingafaniyo Nezinye
UMTSHWEZO omile okwesikhephe osesandleni sikaJordan ubonakala uqhelekile. Sekunjalo, uwuthanda kakhulu. UJordan uthi: “Ndawunikwa nguRussell, umhlobo wentsapho yasekhaya xa ndandisemncinci.” Emva kokuba uRussell eswelekile, uJordan wafumanisa ukuba ebeluncedo kakhulu kutatomkhulu nakubazali bakhe, ebakhuthaza ngamaxesha anzima. Uthi: “Ekubeni ndisazi lukhulu ngoRussell, esi sipho sibaluleke kakhulu kum.”
Njengoko umzekelo kaJordan ubonisa, isipho sisenokubonakala singaxabisekanga yaye singabalulekanga kwabanye. Kodwa umntu onoxabiso unokusithanda kakhulu. Xa ithetha ngesipho esingenakuthelekiswa nanto, iBhayibhile ithi: “Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade.”—Yohane 3:16.
Isipho esinokwenza umntu afumane ubomi obungunaphakade! Ngaba singakhona isipho esinjalo? Nangona singabalulekanga eso sipho kwabanye abantu, amaKristu okwenene ‘asixabise’ kakhulu. (INdumiso 49:8; 1 Petros 1:18, 19) Kwakutheni ukuze uThixo anikele ngoNyana wakhe ehlabathini njengesipho?
Umpostile uPawulos uchaza isizathu soko ngala mazwi: “Isono sangena ngomntu omnye ehlabathini nokufa ngaso isono.” (Roma 5:12) Indoda yokuqala uAdam, yona ngokungamthobeli ngabom uThixo ibe ngenxa yoko yafumana isohlwayo sokufa. Ukufa kwasasazeka kubo bonke abantwana bayo.
“Umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa, kodwa isipho uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu.” (Roma 6:23) Ukuze akhulule abantu ekufeni, uThixo wathumela uNyana wakhe, uYesu Kristu emhlabeni ukuze anikele ngobomi bakhe obufezekileyo ehlabathini. Ngenxa yaloo ntlawulelo, bonke ababonisa ukholo kuYesu baza kuphila ubomi obungunaphakade.—Roma 3:24.
Xa ethetha ngeentsikelelo uThixo aza kuzinika abakhonzi bakhe esebenzisa uYesu Kristu, uPawulos uthi: “Makubulelwe kuThixo ngenxa yesipho sakhe sesisa esingathethekiyo.” (2 Korinte 9:15) Intlawulelo ixabiseke ngendlela esingenakukwazi ukuyichaza. Kodwa kwizipho zikaThixo zothando, kutheni intlawulelo isesona singenakuthelekiswa nanto? Yahluke njani kwezinye izipho asinike zona? * Thina sifanele siyijonge njani? Sicela ufunde iimpendulo zeBhayibhile kula manqaku mabini alandelayo.
^ isiqe. 8 Ngokuzithandela, uYesu “wanikela umphefumlo wakhe ngenxa yethu.” (1 Yohane 3:16) Noko ke, ekubeni yayiyinjongo kaThixo le, la manqaku athetha ngoThixo owasinika intlawulelo.